कम्प्युटर समस्या र समाधानका उपायहरु, हेर्नुहोस् | News Polar
कम्प्युटर समस्या र समाधानका उपायहरु, हेर्नुहोस्
काठमाडौं । कम्प्युटरमा प्राय जसो आई पर्ने समस्याहरु बारेमा जानकारी दिनेछौँ । साथै समस्याहरु समाधान गर्ने उपाय बारे पनि बुझाउने प्रयास गर्छौ । यो अवश्य पनि लाभदायक हुनेछ । केहि टिप्स प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) हिडन (Hidden) फाइल नदेखिनु
Start > Run र Regedit टाईप गरेर Enter गर्नुस् । त्यसपछि यो location सम्म जानुस् HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Explorer\_Advanced\_Folder\_Hidden\_SHOWALL
CheckedValue कि मा Double क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ Value Data लाई 1 राखिदिनुस् ।
२) (Drive) ड्राइभलाई डबल क्लिक गर्दा (News Window) न्यू व्यिन्डोमा खोलिनु
किन Drive नयाँ window मा खोलिन्छ त ? यहाँ अबस्य पनि Virus अथवा अरु कुनै समस्या आएर नै हो । यसलाई समाधान गर्ने तरिका :
१. Start > Run > र यहाँ regsvr32 /i shell32.dll टाईप गर्नुस्
२. ok गर्नुस् ।
३. तपाईंले यो message पाउनु हुन्छ
४. अब तपाईंको समस्या समाधान भयो
१. Start > Run > Regedit टाईप गर्नुस् र ओके गर्नुस् ।
२. अब HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/Shell मा जानुस्
३. Default key लाई double क्लिक गर्नुस् र त्यहा none टाईप गर्नुस्
४. अब HKEY_CLASSES_ROOT/Drive/Shell मा जानुस्
५. Default key लाई double क्लिक गर्नुस् र त्यहा none टाईप गर्नुस्
६. ok गर्नुस् ।
१. Start > Run > र यो टाईप गर्नुस् reg add hkcr\_drive\_shell /ve /d none /f
३) आफ्नो कम्प्युटरलाई भाइरस (Virus) हरुबाट अटोरन डिसएबल (Autorun Disable) गरेर जोगाउने तरिका धेरै Virus हरु कम्प्युटरमा सर्ने कारण तपाईंको कम्प्युटरमा कुनै CD वा pendrive राख्ने बित्तिकै Autorun हुनाले हो र यो Autoplay enable window को difault set भएर पनि हो ।
१. Start > Run > regedit टाईप गर्नुस् र ओके
२. अब HKEY_CURRENT_USER\_Software\_ Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_Explorer मा जानुस्
३. NoDriveAutorun मा double क्लिक गर्नुस् र Hexadecimal मा Value “FF” वा Decimal मा Value 255 टाईप गर्नुस् ।Note: यदी त्यहाँ NoDriveAutorun भन्ने कि छैन भने दाँया तिर right क्लिक गरेर new dword value मा क्लिक गरेर NoDriveAutorun टाईप गरेर Enter गर्नुस्
४. Registry window लाई exit गर्नुस् र कम्प्युटर लाई restart गर्नुस्
यो तरिका बाट तपाईंले Autorun लाई Disable गरेर Virus infected USB pendrive वा CD लाई Autorun हुनबाट
रोक्न सक्नु हुन्छ र autorun.inf virus लाई Run हुन बाट जोगाउन सक्नु हुन्छ ।
४) (सो डेस्कटप) “Show Desktop” (Icon) आइकनलाई कसरी (Restore) रिस्टोर गर्ने ?
कहिले काहीँ गल्तीले तपाईंले “Show Desktop” Icon लाई shift+Delete गर्नु भयो यो सोचेर कि यो मात्र Shortcut हो । तर वास्तवमा त्यो नै orginal icon रहेछ भने के गर्नु हुन्छ ? ShowDesktop Icon अरु Icon हरु भन्दा फरक हुन्छ र सामान्यतया यो Icon लाई फेरी Restore गर्न सकिदैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंले यो तरिका अपनाउन सक्नु हुन्छ ।
१. Notepad लाई खोल्नुस् र तल लेखिएको code लाई कपि गरेर paste गर्नुस् ।
२. अब फाइलको नाम ShowDesktop.scf राखी यो location मा लगेर save गरिदिनुस्, C:\_Document and Settings\_Username\_Application Data\_Microsoft\_Internet Explorer\_Quick Launch
३. कम्प्युटरलाई restart गर्नुस् ।
प्रकाशित : जेठ २०, २०७८, १३:२८:०१
स्टार्ट अप व्यवसाय गर्ने युवा उद्यमीलाई बजेटमा विशेष सुविधा
टेलिकमको ‘भीओएलटीई’ सेवाको आजदेखि सुरुवात